February 16, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha February 16, 2020
(Madrid) 17 Feb 2020. Celta Vigo ayaa taako u dhigtay kooxda Real Madrid oo ay marti ugu noqotay garoonka Bernabeu, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Celta Vigo. […]Sii akhriso
(Roma) 17 Feb 2020. Lazio ayaa garoonkeeda Olimpico saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Inter, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1 ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Inter. Daqiiqadii 44-aad Inter ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana […]Sii akhriso
Somali Court Sentences Mogadishu Official for Past al-Shabab Membership – VOA News
Somali News February 16, 2020
Somali Court Sentences Mogadishu Official for Past al-Shabab Membership VOA NewsSii akhriso
Young Somalis Step in Where Government Fails The New York TimesSii akhriso
Dowladda FS Soomaaliya iyo Urur Goboleedka IGAD oo magaalada Muqdisho kulan wada-tashi ah ku yeeshay+sawirro
Soomaaliya February 16, 2020
(Muqdiaho(SONNA) Dowladda Soomaaliya iyo Urur Goboleedka IGAD ayaa magaalada Muqdisho kuyeeshay kulan wada-tashi ah oo ku saabsan hannaanka Ilaalinta nabad galyada iyo wada shaqeynta heer Gobol ee dowladaha kulaala Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Kulankan wada tashiga ah oo ay guddoomiyeen u qeybsanaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda ee Arrimaha Isbahaysiga Badda Cas iyo Gacanka Sii akhriso
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta oo cambaareeyey dilka wariye Cabdiwali Cali Online
Wasiirka Warfaafinta,Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa cambaareeyay Dilka Wariye Cabdiwali Cali Online oo ka tirsanaa Universal Tv. Wariyaha ayaa maanta Kooxo hubeysan waxa ay ku dileen Degmada Afgooye kuwaas oo ay ku raad joogaan Hay’adaha amnmaanka. Wasiir Maareeye ayaa tacsi u diray qoyskii, Ehelkii iyo bahda Universal TV ee uu ka geeriyooday Marxuum Cabdiwali Cali Online Sii akhriso
(Madrid) 16 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa naadiga Celta Vigo ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Santiago Bernabeu kulan ka tirsan horyaalka La Liga Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Real Madrid iyo Celta Vigo. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo […]Sii akhriso
(Roma) 16 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Lazio ayaa naadiga Inter Milan ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Olimpico kulan ka tirsan horyaalka Serie A. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Lazio iyo Inter. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo dhammaystiran:- Lazio XI: Inter […]Sii akhriso
(London) 16 Feb 2020. Arsenal ayaa saddexda dhibcood ka qaadatay Newcastle United oo marti ugu aheyd garoonka Emirates, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada 26-aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood waxay sameeyeen […]Sii akhriso
Ethiopia passes law imposing jail terms for internet posts that stir unrest – Reuters
Ethiopia News February 16, 2020
Ethiopia passes law imposing jail terms for internet posts that stir unrest Reuters Ethiopia parliamentary election: Poll announced for August 29 Al Jazeera English Ethiopia passes controversial law curbing ‘hate speech’ Al Jazeera English Ethiopia approves controversial law curbing hate speech The Associated Press Ethiopia parliament passes law punishing Sii akhriso